पर्वतका सन्दिप लामिछाने जो जन्मेको १४ दिनदेखि १८ वर्षसम्म सुतेको सुत्यै ! – Dainik Sangalo
पर्वतका सन्दिप लामिछाने जो जन्मेको १४ दिनदेखि १८ वर्षसम्म सुतेको सुत्यै !
September 2, 2020 342
पर्वत । पर्वतको एक विकट गाउँका १८ वर्षीय किशोर जन्मेको १४ दिनदेखि अहिलेसम्म सुतेको सुत्यै छन् । शुरुमा मेनेन्जाइटिस अर्थात मस्तिष्कको झिल्ली गम्भीर तरिकाले सुनिने रोगबाट ग्रसित कुश्मा नगरपालिका–१२ ठुलीपोखरीका सन्दीप लामिछाने चौबीसै घण्टा सुतेर जीवन बिताइरहेका छन् ।
उनको हातखुट्टा, शरीरको कुनै पनि भाग चल्दैन भने बोल्न, हाँस्नसमेत सक्दैनन् । त्यतिमात्र होइन, उनी आफैँ खानसमेत सक्दैनन् । सहजरूपमा स्वास फेर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
शुरुआतमा उपचारका लागि गण्डकी अस्पताल पोखरा लगिएको भए पनि रोग निको नभएपछि उनलाई विभिन्न झारफुक गर्ने तथा नेपालका सबैजसो अस्पतालमा पुर्याउँदा पनि अवस्था नसुध्रिएको उनकी आमा कल्पना सुवेदीले बताइन् । “नेपालका सबै ठाउँमा पुर्यायौँ तर निको हुन सकेन, अहिले काठको मुढोजस्तै ज्यूँदो अवस्थामा रहेको शरीर कुरेर बस्नुको विकल्प भएन”, सुवेदीले भनिन् ।
शारीरिकरूपमा वृद्धि भए पनि हातखुट्टा र शरीरको कुनै पनि भागले काम नगरेपछि काठको मुढोजस्तै चौबिसै घण्टा पल्टाएर वा ह्विलचियरमा ठडाएर राख्ने गरिएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको लामिछानेको परिवारका जेठा छोरा सन्दीपको अवस्था यस्तो भएपछि ठूलो समस्या परेको सन्दीपका बाबु कृष्णप्रसादले गुनासो गरे । सुवेदी परिवारका अन्य दुई सन्तान भने सपाङ्ग नै छन् । “रोग लागेदेखि नै उपचारबाट निको हुन्छ कि भनेर लाखौँ खर्च गरियो, बीसको उन्नाइस भएन”, आमा कल्पनाले रुँदै भनिन्, “न धन बच्यो, न सपाङ्ग नै भयो ।”
देख्दै असहजजस्तो देखिने उनको अवस्थाले परिवारका सदस्य पिरोलिने गरेका छन् । उनलाई खुवाउने, दिसापिसाब गराउने, लुगा फेरिदिने, नुहाइधुवाई गरिदिनका लागि एक जना रातदिन खट्नुपर्ने अवस्था छ । आमाबाबुले रात र दिन आलोपालो गरी स्याहारसुसार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको कल्पनाको भनाइ छ । नेपालमा उपचारको अर्को पद्धति नभए पनि कतैबाट आर्थिक सहयोग पाएमा विदेशमा लैजाने सोच रहेको उनीहरुको छ ।
“अब त निको होला भन्ने आश पनि मरिसक्यो”, कल्पनाले भनिन्, “यही अवस्थामा कति वर्ष कुरेर बस्नुपर्ने हो थाहा छैन ।” भगवानले पनि आफ्नो जस्तो गरिब परिवारमा बज्रपात पारिदिएको कल्पनाको दुखेसो छ । सन्तान पाएपछि हुर्काउँला, बढाउँला, पढाउँला र उनीहरुको कमाइबाट सुखसयलमा बसौँला भन्ने अभिभावकको चाहना चकनाचुर भएको कृष्ण दम्पतीको गुनासो छ ।
सन्दीपले पूर्ण अपाङ्गताको सुविधा पाउँदै आएका छन् भने स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि रु पाँच हजार सहयोग पाएका छन् । यसबाहेक अहिलेसम्म राज्यबाट उपचारका लागि होस् वा दैनिक स्याहारसुसारका लागि होस् कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो उनीहरुको छ ।
Prevनेपालमै २२ वर्षीया महिलाले ४ वटा बच्चालाई जन्म दिईन, आमाको अवस्था गम्भीर
Nextनेपालकै यस्तो जिल्ला जहाँ एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैनन्
दरवार ह त्या,का,ण्ड हुँदा आफु अगाडी नै रहेको र आफुले देखेको कुरा यसरि बताइन हिमानिले
‘भ्वाइस अफ नेपाल’की कोच आस्था राउत बा,हिरिइन्, वि,बा,दित आस्थाको स्थानमा शान्त स्वभावकी मेलिना आइन्
आफ्नै अफिसकी सरसफाइकर्मीसँग पुटिनको अ, वैध स, म्बन्ध, दशौं अर्ब रकम दिएर गोप्य राखे
बुटवलमा भयानक दुर्घटना क्षतविक्षत बन्यो कार